Posted on October 23, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
Google play store ကိုဝင်တဲ့ အခါမှာ This item isn’t available in your country ဆိုပြီးဝင်မရဖြစ်နေပါသလား……..?။ အဲဒီလိုဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ တစ်ချို့apps တွေကို နိုင်ငံတွေအလိုက်ကန့် သတ်ထားကြပါတယ်။မိမိက အသုံးပြုခွင့် မရှိတဲ့ နိုင်ငံကဖြစ်နေရင် အခုလိုဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ ဖုန်းမှာသွင်းထားတဲ့ application တွေကို upgrade လုပ်ချင်ရင်
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်ရင် Market ကို အသုံးပြုချင်ရင်အားနာစရာမလိုတော့ ပါဘူး ။ စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းလို့ ရပါပြီ။Google play store ကိုကျော်ခွလိုက်ပါ ။(100% WORKING ) ပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။.ကွန်ပျုတာနှင့် ဖုန်းနည်းပညာများစုဝေးရာ group
၂ ။ မိတ်ဆွေတို့ မှာ Google Play Store Market ရှိရပါမယ်…..
၃ ။ Market Unlocker ရှိရပါမယ်….DOWNLOAD – Zippyshare , tusfiles
၄ ။ TunnelBear ရှိရပါမယ်….DOWNLOAD – Zippyshare . tusfiles
အရင်ဆုံး Market Unlocker ကိုဖုန်းမှာ install လုပ်ပါ။
ယခုကျွန်တော်တို့က play store ကို verison (USA)ကနေ၀င်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ….
– TunnelBear ကိုဖွင့်ပြီး မိမိရဲ့gmail အကောင့်နဲ့ sing up လုပ်ပေးရပါမယ်….Sing Up လုပ်ဖို့အတွက် Createafree account ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်ပေးပါ….ပုံနှင့် အောက်မှာပြထားပါတယ်။
အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ပီးရင် Create Free Account ကို နှိပ်လိုက်ပါ။….ဒါဆိုရင်တော့ မိမိ gmail ထဲကို Tunnel Bear ကနေ Activate လုပ်ဖို့အတွက် mail ပို့ပါလိမ့်မယ်…..
မိမိတို့ရဲ့mail ထဲကိုစာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့activate လုပ်ပေးလိုက်ပါ…..ဒါဆိုရင် free account ဖွင့်ပြီး ပါပီ….login ၀င်ပါ…..အောက်က ပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာရင် On/Off မှာ ON ကိုရွေးလိုက်ပါ….attention တစ်ခုတက်လာရင် I trust this application ရှေ့မှာအမှန်ချစ်ပေးပီ ok နှိပ်ပါ…
connected လို့ noti ဘားမှာ သော့ပုံလေး ပေါ်ရင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပီ Account ဘေးမှာ Done ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ…. ဒါဆိုရင် ရပါပီ
pdf file အနေနဲ့ သိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာယူလိုက်ပါ။
PASSWORD တောင်းရင် SAITHUTHAI လို့ ထည့် ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။
DOWNLOAD – LINK 1 , LINK 2
← iOS 7.0.3 for all supported devices
YOUTUBE DOWNLOADER ကိုအသုံးပြုချင်သူများအတွက် →
4 thoughts on “Google play store ကိုကျော်ခွဝင်ချင်သူများအတွက် ( ဖတ်ပေးပါရန်)”
G610 မှာ gmail /google/ talk /play story ​တွေမရတာ ဘယ်​လိုလုပ်​ရလဲ ​ပြော​ပေးပါအုံး